Huawei သည်မြင့်မားလွန်းသောကြောင့် Mate 20 ၏ DXOMark ရမှတ်ကိုကြေငြာခြင်းမရှိပါ။ | Androidsis
Huawei သည်ယနေ့ထုတ်စီးရီးကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် အိမ်ထောင်ဖက် 20 ရှန်ဟိုင်းမှာအခမ်းအနားမှာတရုတ်စျေးကွက်အတွက်။ Mate 20 စီးရီးကိုလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကလန်ဒန်တွင်ပထမဆုံးစတင်ခဲ့သော်လည်းသတိရပါ ယခုအခါ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏မူလနေရာတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်.
ယခုအချိန်အတော်အတန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ DXOMark သည် flagship model ၏ကင်မရာကိုဖုန်းကြေငြာသည့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤအမှုများရှိနေသော်လည်း Mate 20 စီးရီးများသည်ယခုအချိန်အထိထိုလေ့ကျင့်မှုမှသွေဖည်ခဲ့သည်။ Huawei သည်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်. ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
တရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ၊ Huawei က DXOMark ရမှတ်ကိုမည်သည့်မော်ဒယ်လ်မှထုတ်ရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် DXOMark ကင်မရာအခြေခံစံနှုန်းသည်အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Mate 20၊ Mate 20 Pro၊ မိတ် 20X y မိတ်ဖက် 20 Porsche သူတို့မှာအစွမ်းထက်တဲ့ကင်မရာ setup ရှိတယ်၊
ရှင်းနေသည်မှာ Mate 20 Pro သည်အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်သင့်သည်အနောက်ဘက်ကင်မရာသုံးဆနှင့် 40 megapixel + 20 megapixel + 8 megapixel ကင်မရာ setup ပါဝင်သည်။ သူတို့သီးခြား DXOMark ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မျှမသိပါ။ Huawei ကမလိုအပ်တဲ့လူသိရှင်ကြားကိုမဆွဲချင်ဘူးလို့ပြောတယ်သို့သော်တစ်နေ့တွင်ကုမ္ပဏီသည်ရမှတ်ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ဖြစ်သကဲ့သို့, el Huawei P20 Pro နေဆဲ DXOMark အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းအဖြစ်ရပ်တည်၎င်းမှာစုစုပေါင်းရမှတ် ၁၀၉ ဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက်တွင် Apple ၏နောက်ဆုံးပေါ် iPhone XS Max၊ ၁၀၅ မှတ်၊ ကျနော်တို့ Xiaomi ကရောသမ 3ယမန်နေ့ကပွဲ ဦး ထွက်ခဲ့ပြီးရမှတ် ၁၀၃ မှတ်ဖြင့်တတိယနေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
သို့သော်ဤဖုန်းများ၏ဓာတ်ပုံပြပွဲသည်စနစ်ထက်ပိုကောင်းသည် Google Pixel 3? အရာအားလုံးဟုတ်ကဲ့ညွှန်ပြ။ ဤအပိုင်းသည်အလွန် G အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း Huawei ၏သုံးဆကင်မရာဖွဲ့စည်းမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲဘက်မှာတော့ Google ကလောက်မများပေမယ့်သူ့ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ရုတ်တရက်တော့။ သော်ငြားလည်း, ဒါကငါတို့နောက်မှအတည်ပြုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ယခုအချိန်ထိထုတ်ဖော်ပြသသောအရာများကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ဂူဂဲလ် Pixel3၏ 'Night Sight' mode ဖြင့်လျှပ်တစ်ပြက်မီးအလင်းမရှိဘဲညဥ့်၏ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်း y ဂူးဂဲလ် Pixel3နှင့်အတူယူရိုအုပ်စု၏ selfie များ၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးကိုအာရုံစိုက်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei သည်မြင့်မားသောကြောင့် Mate 20 ၏ DXOMark ရမှတ်ကိုကြေငြာခြင်းမပြုခဲ့ပါ